Thursday October 20, 2016 - 19:02:06 in Wararka by Super Admin
Taliska Ciidamada NATO ee ku duulay dalka Afghanistan ayaa xaqiijiyay inay dhinteen Seddax Askari oo Mareykan ah, kadib markii Nin soo xirtay direyska Ciidamada Meliteriga uu toogasho ka geytstay Saldhig Meliteri oo kuyaalla magaalada Kaabuul ee Caasimadda dalkaasi.
War Qoraal ah oo kasoo baxay NATO waxay ku sheegeen in weerarkaasi ay sidoo kale ku dhaawacmeen Seddax Askari oo kale oo Mareykan ah, waxaana Askarta la dilay ay laba ka mid ah la shaqeynayeen Shirkad gaar ah oo dhinaca ammaanka qaabilsan.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Maamulka dabadhilifka ah ee dalka Afghaistan ayaa dhankeeda Bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in Weerarka toogashada ah uu ka dhacay Saldhigga Meliteri ee lagu magacaabo Riishkoor ee magaalada Kaabuul, waxaana Bayaanka uu tilmaamay in ruuxa weerarkaas geystay uu isna ku dhintay rasaas ay ku fureen Ciidamadii Saldhigga ku sugnaa.
Tobonaan isugu jira Ciidamo iyo la taliyeyaal Meliteri oo reer galbeed ah ayaa Sanadihii lasoo dhaafay ku dhintay weerarro toogashooyin ah oo ay u geysteen rag ka tirsan Ciidamada Maamulka daba dhilifka ee Wadanka Afghanistan oo si hoose ula shaqeynayay Mujaahidiinta Xarakada islaamiga ah ee Daalibaan.
Warbixinno tirakoob ah oo la sameeyay ayaa waxaa lagu sheegay in tan iyo Sannadkii 2008-dii inay dalka Afghanistan ka dhaceen 92 Weerar oo ay geysteen rag soo xirtay direyska Ciidamada, waxaana weeraradaasi ku dhintay 150 Askari oo ka tirsanaa Ciidamada Gaalada Nato, halka ay ku dhaawacmeen 187 kale.
Dowladda Mareykanka waxaa dalka Afghanistan ka jooga inkabadan 9000 oo Askari, iyadoona bishii July ee bartamihii Sanadkan uu hogaamiyaha Mareykanka Barack Obama uu shaaca ka qaaday in Ciidamadiisa ay sii joogayaan dalkaasitaas oo uu sababeeyay Xaaladda dhiaca Ammaanka ee dalka Afghanistan oo aan weli caga badan ku taagneyn.